Uncedo ekukhetheni umatshini wokuhlamba
Indlu yasekhaya U buchule
Umatshini wokuhlamba sele ungakhange uthathwe njengento yokunethezeka: ngokuqhelekileyo kuzo zonke izixhobo zombane abasebenzisi basekhaya bathenge okokuqala. Ukunikezelwa kwenani lemveliso kunye nemodeli yalezixhobo ezisetyenziswayo njengamanje zinikwe ngamaketanga okuthengisa, uncedo ekukhetheni umatshini wokuhlamba awuyi kubuhlungu umthengi.
Okokuqala khetha isigxina sokubeka umatshini wokuhlamba. Oku kuya kugqiba ukhetho lwesayizi kunye nendlela yokulayisha umatshini. Ngoku iimarike zinika izixhobo zokuhlamba kunye neentlobo ezimbini zokuhlamba iimpahla: ezizenzekelayo kunye nezingezantsi. Ngokuqhelekileyo abendlukazi bakhetha uomatshini kunye nokulayishwa okubonakalayo njengento ehambelanayo kwaye ayifuni indawo eyongezelelweyo yokuvula umnyango. Umatshini onjalo wokuhlamba kulula ukubeka kwindawo ethile engasetyenziswanga. Imishini yokuhlamba ngokulayisha ngokuqhelekileyo ibanzi ububanzi be-40-45 cm, ubunzulu be-60 cm kunye nobude buka-85 cm.
Amashishini aphethe ukulayishwa kwangaphambili akuvumela ukuba ugcine inkqubo yokuhlamba - kuba bafazi abathile kubalulekile. Xa ukhetha umatshini wokulayisha ngaphambili, kufuneka uqaphele ubukhulu bayo, kwaye kungenxa yoko.
Ngokuqhelekileyo ububanzi bemishini yohlamba ngu-60 cm, ubude - 85 cm, ubunzulu-ukusuka kwi-32 ukuya kwi-60 cm. Ukuba unayo indawo eyaneleyo yokubeka umatshini wokuhlamba, nqama "kumxinwa". Ezi matshini, ezinokusebenza ngokubanzi, kwi-depth cm ukuya kwi-32 cm zingakwazi ukuhlala ngokufanelekileyo kwindawo yokuhlambela encinci, okanye mhlawumbi kwi-niche ekhululekile. Kwaye abayi kuhlala kwindawo ekulu ekhitshini. Ukongezelela, umatshini wokuhlamba umphambili ungabandakanywa lula kwi candelo leyunithi yekhitshini; unako kwaye ungabandakanyi, sebenzisa oomatshini abanjengobusuku bokuhlwa okanye umsebenzi obongezelelweyo womsebenzi ekhitshini: vala nje ukugubungela umatshini nge-countertop.
Unokuhlamba kangakanani okufunekayo? Kubantu abangatshatanga, kunye neentsapho ezincinci, umatshini wokuhlamba oomatshini kunye nokulayishwa okuphezulu kweekhilogram ezintathu kwanele. Ukuba intsapho inabantu abangama-4-6, umatshini onamandla okudlala i-drum ye-4.5-5 kg ​​uza kulungiswa. Kuphela abantu abangaphezu kwe-7 - iintsapho zifuna iimashishini zokuhlamba kunye nokulayishwa kwe-6-7 kg
Idrum - indawo yomatshini wokuhlamba, apho iindawo zokuhlamba zihlala khona ngexesha lojikelezo lonke lokuhlamba, ukuhlanjululwa nokumisa. Iingoma kumashishini okuhlamba zenziwe ngensimbi engenasici, kodwa itanki yindlela apho isigubhu sijikeleza ngayo - sinokuba yiplastiki, kunye nentsimbi engenasici, kwaye ngamanye amaxesha. Kungakhathaliseki ukuba yintoni, i-tank impahla kufuneka ibe ngumgangatho ophakamileyo, kuba i-drum engekho emgangathweni kunye nengubo "ebuthakathaka" kwaye ngaphandle kwayo iya kuphuma ngokukhawuleza, kwaye (ngakumbi kubaluleke!) Ingonakalisa ingubo okanye iimpahla.
Iitanki eziphefumlelweyo zilahlekelwa yi-stainless and polymmer ukuqhuba. Ngoko ukusetyenziswa kwabo kunciphise. Kodwa xa ukhetha umkhiqizo nge-tank yensimbi engenasici, ingqalelo kufuneka ihlawulwe kuyo: insimbi kufuneka ibe nemgangatho ophezulu, isebenzisa i-laser welding kunye ne-rolling. Ekhutshwe ngeteknoloji, itanki linokuhlala iminyaka engama-80, okanye i-100: eli xesha lide ixesha elide kunokuba ubomi bomshini ngokwawo! Kodwa ukuveliswa kwetanki kwizinto ezinjalo kufuna inkcitho eninzi, oko kuthetha ukuba umatshini ngokwawo uya kuba kubi kakhulu. Insimbi yomgangatho ophantsi kwinqanaba elincinci linciphisa ukuthembeka nokuzinza kwemveliso. Ngeemali ezincinane, kunengqiqo ukujonga imashishini yohlamba ene-plastic tank.
Unokukhetha umatshini wokuhlamba kunye netanki yezinto ezipolitiki, ezifana neCarboran, i-Poliplex, i-Polinox, iSilitek. Iintlobo eziphambili zezi zinto zixhatshazwayo, ziyakwazi ukufudumeza kunye nokuthatha isenzo sezinto zokuhlambalaza. Baphinde bawuthathe kakuhle ukunyakaza, ukwenza umsebenzi wemoto uqine. Ukusetyenziswa kwamandla ngexesha lokusebenza koomatshini obunjalo kuncitshiswe ngenxa yokuqhutyelwa kwee-plastiki ezizodwa. Iitanki ezenziwe ngezinto ezidibeneyo ze-polymer zithembeka kwaye zomeleleka, ubomi babo benkonzo bufikelela kwiminyaka engama-25 ukuya kwe-30-eneneni, oku kubomi benkonzo yomshini wonke.
Ngokwenza oko, amathuba omatshini wakho wokuhlamba ancike kwiimpawu zalo zobugcisa, ezifana neklasi yokuhlamba, iklasi yokusetyenziswa kwamandla, iklasi kunye nejubane le-spin. Ukubonelela ngoncedo xa ukhetha umatshini wokuhlamba, kuyafaneleka ukuqwalasela le parameters.
Igumbi lokuhlamba lomatshini wokuhlamba liboniswa ngamagama aseLatini A ngeG, ngelixa iiklasi A kunye neB zihambelana nokuhlamba okuphezulu okubonakalisa isimo sengqondo esilungileyo. Kuyafana nakwiiklasi zokujikeleza. Kufuneka kuqatshelwe ukuba le nqondiso ibaluleke ngaphezu kwenani leenguqulelo ngexesha lokuphambuka, njengoko libonisa ubuncitshisi obuncitshisiweyo bokuhlamba emva kokuhlamba.
Iklasi yokusetyenziswa kwamandla ibonakaliswe ngeencwadi ukusuka ku-A ukuya kwi-G - ezi ncwadi zibonisa izinga loqoqosho ekusebenziseni umbane ngexesha lokuhlamba. Ngoko ke, xa uthengisa imoto ngeklasi yokusetyenziswa kwamandla A okanye iB, unokufumana ukugcinwa kwindleko zombane.
Isivinini se-spin - isalathisi esingabalulekanga. Ukukhethwa ngokuchanekileyo, kukuvumela ukuba ugcine indawo yokuhlamba iimeko kakuhle nangemva kokuhlamba ngokuphindaphindiweyo. Ngoko kungcono ukhethe umatshini wokuhlamba kunye neendlela ezininzi zokuhlamba iintlobo ezahlukeneyo zeendwangu - ngokukhawuleza ukusuka kwi-400 ukuya ku-1000 rpm. Isantya esiphezulu sinomsebenzi: kunye neengxube zomswakama kulolu hlobo, ukusalela kwee-detergent kwakhona kususwa kwindawo yokuhlamba. Ukuphakama kwesantya sokujikeleza kwesigubhu ngexesha lokuphambuka, ukuhlamba kwakho ngokukhawuleza kuyomisa. Kodwa i-ironing iyakufuna umzamo-kwizinga eliphezulu lokugqithisa intsimbi ngaphezulu, kunye nokugqithisa ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, abavelisi banamhlanje bamashishini okuhlamba, kukho isisombululo kule nkinga - kwiimodeli ezithengisa kakhulu kukho urhulumente okhusela iimbunci kwilineni. Amava abonisa ukuba utywala kumashishini eneenombolo eziphezulu zokuguqulwa kukugqithiseleyo, kwaye akunakwenzeka.
Ijubane le-spin lilungele ukuhlamba ngokuqhelekileyo - 600-800 rpm. Ngama-1000-1500 rpm, uya kuziva umahluko ngokucima ngaphandle kweetekisi eziqingqiweyo. Kodwa ngeempahla ezihlukeneyo, abavelisi bemishini yokuhlamba bayacetyiswa ukuba basebenzise isantya esichazwe ngokuthe ngqo. Umzekelo, izambatho zelinen ecikizekileyo kunye neetekisi zixineke kakhulu kwi-400-600 rpm, 800-900 zifanelekile ngekotoni kunye ne-synthetics, kwaye ku-1000 kunokwenzeka, umzekelo, ukukhangela i-jeans ngokufanelekileyo. Ukuguquka ngaphezulu kwe-1000 kufanelekile ukugqoka iingubo, izityela kunye neemveliso ezifanayo. Ukufumana iimpahla zokuhlambela kakuhle emva kokuhlamba, eqinisweni, kulula kakhulu, kodwa omnye akufanele ahlawule ingqalelo kuyo: kodwa umgangatho kunye nezinto ezongezelelweyo zokuhlamba zibaluleke kakhulu. Ngoko ke, ngaphandle kokugxotha isivinini esikhulu se-spin, kunokwenzeka ukuba uthenge umzekelo kwi-600 okanye nge-800 rpm, kodwa usebenze ngakumbi.
Indlela yokukhetha isomisi seenwele
Ukukhetha i-PC yeethebhulethi
Unokukhetha njani i-grinder yombane?
Yiyiphi i-humidifier yomoya okufanele ndiyikhethe?
Indlela yokuhlamba izitya kwi-dishwasher?
I-Steamer kwiingubo-ukuphononongwa malunga nenkampani ezahlukeneyo
Indlela yokukhetha umshicileli welaser ekhaya lakho
Silungiselela isaladi emangalisayo nge-honey agarics
Yintoni elindele uAcarius ngo-2014
Ukupheka okulula ukufumana ukupheka
11 izityalo ezinceda ukunciphisa umzimba
Ama-champagne aphekwe kwi-grill
Ipolenta kunye neetamatato
Amabhanti emzimbeni: izizathu kunye neendlela zokonyango
I-Grass Cat's Claw, iimpawu zokuphilisa
Sibheke esibhakabhakeni silinde utshintsho
Indlela yokulawula ixesha kunye nexesha lolawulo lomfazi wendlu yanamhlanje
I-chicken shish kebab kwi-soy marinade neminquma
I-sulfur coorks ezindlebeni zabantwana
Ikhekhe leshokoledi nge-mascarpone
Iyintoni ingozi yokutya kwemifuno?